Soosaarayaasha Shiinaha iyo Alaab-qeybiye dhoobo Shiinaha Graphite | Jinglong
Weelka dhoobada ah ee garaafka lagu dhejiyo wuxuu leeyahay qeexitaanno dhammaystiran oo ka kooban 1 # illaa 1500 #. Ka samaysan waxyaabo ceyriin tayo sare leh iyo qaaciido farsamo sare leh, dhaldhalaalka dhoobada garaafka leh ayaa leh faa'iidooyinka cufnaanta sare, caabbinta daxalka, iska caabinta heerkulka sare, habsami u socodka, adkeysiga qiijiinta adag, caabbinta kuleylka ee heerkulka sare, waxqabadka kiimikada ee xasiloon, qaabka quruxda badan, waara , iwm
Iyada oo leh xasilloonideeda oo la isku halleyn karo, waxay ku raaxeysataa suuq wanaagsan markasta. Waa weel lagama maarmaan u ah shubka iyo shubista biraha aan birta ahayn. Isla mar ahaantaana waxaan taageernaa soo saarista tuubbada garaafka, garaafka garaafka iyo alaabada kale, oo soo saar alaabada garaafka qaabeysan ee qaabeysan sida ku cad ements kala duwan.
Shayga Halbeega caadiga ah Xogta Tijaabada
Jilicsanaan ≥ 1630 ℃ 1635 ℃
Waxyaabaha Kaarboonka ≥ 38% 41.46%
Porosity Muhiim ah 35% 32%
Cufnaanta Jumlada ≥ 1.6g / cm³ 1.71g / cm³
Graphite Clay Crucible * Qeexitaan
Faahfaahinta (D) Ballaca Dusha sare (H) Guud ahaan Dhererka (d) Ballaca Dibedda
Xusuusin values ​​Qiimaha kor ku xusan waxaa loogu talagalay tixraac oo keliya, cabirka dhabta ah ee badeecada ayaa guuleysan doona, waxaana la heli karaa mashiinno qaabeysan oo qaabeysan.
Ogeysiisyada ku shaqeynaya iskudhafyada garaafka
1. Weelka waa in lagu kaydiyaa xaalada qalalan
2. Si khafiif ah u qaad dhalada
3. Ku kululey mashiinka mashiinka lagu qalajiyo ama foornada agteeda. Heerkulka kululaanaya waa inuu ahaadaa 500 ℃.
4. Weelka waa in la hoos dhigaa foornada bisha foornada.
5. Markaad birta geliso wiishka, waa inaad u qaadataa awooda miiqyada tixraac ahaan. Haddii wiishku aad u buuxo, waxa ku dhaawacmaya ballaadhinta.
6. Qaabka clamps wuxuu u baahan yahay sida kan la jajabiyey. Ka fogow burburka xoogga leh ee burburka.
7. Nadiifi weelasha si joogto ah oo fudud.
8. Weelka waa in la geliyaa bartamaha foornada oo laga tagaa masaafada u dhexeysa sheyga iyo foornada.
9. Hal wiig hal usbuuc u rogo tanina waxay kaa caawin doontaa inaad dheereyso nolosha adeegga.
10. Ololku waa inuusan toos u taaban dhakada.
11.24 saacadood oo istcimaal joogto ah ayaa iskutallaabtu ka dhigi doontaa nolol dheer.
Hore: Korontada UHP
Xiga: Pyrolytic garaaf garaac leh